မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … (၃)
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … (၃)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Dec 28, 2012 in Photography, Travel | 27 comments
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … ၁
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … ၂
သမိုင်းဝင် ရွှေအင်းတိန် စေတီတွေဆီကနေ ပြန်လာတော့ …
နေ့ခင်း ဝါးဒီးဆွဲချိန်ကို ရောက်ပြီ …။
ဒါနဲ့ပဲ အင်းလေးက နေရာတစ်ခုမှာ ဝါးဒီးဆွဲဖို့ စက်လှေနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ် …။
ဝါးဒီးလည်း ဆွဲပြီးရော အင်းလေး အလှကို ကြည့်မိရင်းက ဒါ့ပုံ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ….။
စားသောက်ဆိုင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ အင်းလေးရဲ့ အလှမြင်ကွင်းတစ်ခု
မြန်မာပြည်မှာ အဖွဲ့နဲ့ ခရီးသွားရင်း စားရ၊ သောက်ရတဲ့ ကိစ္စဟာ …
မကောင်းဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား၊ ဘယ်လို ပြောရမလဲတော့ မသိဘူး ….။
ဆိုင်တွေက အုပ်စုလိုက် ဝင်လာပြီ ဆိုရင်၊ ခရီးသွားတွေလည်း သိပြီဆိုရင် …
ဈေးနှုန်းကို မတန်တဆ ယူတတ်တာဟာ အတော်လေးကို ဆိုးဝါးပြီး စည်းစနစ် မကျတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ …။
ကိုင်း … ရှိစေတော့ ….။ ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေ ပါရော့မယ် …။
ဒီလိုပေါ့ ခင်ဗျာ ….။
ဝါးဒီးဖွင့်ပြီးတော့ အင်းလေးရဲ့ နာမည်ကြီး ဖောင်တော်ဦး ဘုရားဆီကို ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ် …။
ဖောင်တော်ဦး ဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းတွေလည်း ကပ်ခဲ့ပါတယ် …။
ဒီကုသိုလ်တွေ အဖို့ကို ချစ်စွာသော ရွာသူားများအား အမျှ ပေးဝေပါတယ် ….။
သာဓု ခေါ်ဆိုတော် မူကြပါကုန် ………။
လှမ်းပြီး ဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့ ဖောင်တော်ဦးဘုရား
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဘုရား
ဒီနေရာမှာ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ် …။
မသိသေးသူတွေ အတွက်ပေါ့ ခင်ဗျာ …။
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဘုရား ငါးဆူ ရှိပါတယ် …။
အဲ့ဒီထဲက တစ်ဆူဟာ အရင်တုန်းက ဒေသစာရီ လှည့်လည်ရင်းနဲ့ ရေအောက်ကို ပြုတ်ကျ သွားခဲ့ဖူးပါတယ် …။
ဟိုပို့စ်ထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဟင်္သာရုပ်နဲ့ ပုံဟာ အဲ့ဒီနေရာပေါ့ ခင်ဗျာ …။
ဒါကြောင့်ပဲ နောက်များမှာ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားတွေ ဒေသစာရီ လှည့်လှည်ပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီဘုရားကို ကျောင်းစောင့်အဖြစ် ထားရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …။
အကယ်၍များ ပင့်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ဟင်္သာရုပ် မှတ်တိုင်ထက် ပိုပြီး ပင့်ဆောင်လို့ မရပါဘူး။
အဲ့ဒါကို ကျော်လွန်တာနဲ့ မှောက်တော့တာပဲလို့ ဖောင်တော်ဦး ဂေါပက လူကြီးက ပြောပြပါတယ် ….။
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဆီကနေ ထွက်ခွာလာပြီး နောက်မှာ …
အလိုတော်ပေါက် ဘုရားကို ဖူးမြော်ဖို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် ….။
အလိုတော်ပေါက် ဘုရားမှာ ဘုရား မျက်နှာစာ တစ်ဖက်ဆီက ဘုရားဆင်းတုတော်များဟာ တူညီမှု မရှိတာကို တွေ့ရသလို …
အဲ့ဒီ မျက်နှာစာတစ်ဖက်ဆီက နံရံများဆီက ကိုယ်ပွားတော် များဟာလည်း အသွင်သဏ္ဍာန် တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် …။
မေးကြည့်တော့ ဒီဘုရားကို မင်းသားတစ်ပါးစီက တစ်မျက်နှာစီ တည်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …။
တကယ်အတိအကျကြီးတော့ မသိပါဘူး ….။
မီးကွင်းကို ဖြတ်ပြီး ကြောင်တွေ ခုန်ပြတယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်ခုန်ကျောင်း ဆီကို ထွက်ခွာ ခဲ့ပါတယ် …။
ကြောင်ခုန်ကျောင်းကို သွားတဲ့လမ်းဟာ အင်းလေး ရေပေါ်ရွာလေးလို့ ဆိုရမယ့် နေရာကို ဖြတ်သွားခဲ့ရတာပါ …။
အဲ့ဒီမှာ ညနေပိုင်း ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ကို လှေကလေးနဲ့ လှော်ခတ်သွားနေကြတဲ့ အင်းလေးရွာသူ ပျိုဖြူလေးများကိုလည်း
ငေးခွင့် ရခဲ့ပါသေးတယ် … အဟီးးး
အိုက်ဒီမှာ ဒါ့ပုံတော့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး …။ အငမ်း လွန်သွားလို့ …။
ကြောင်ခုန်ကျောင်း ရောက်တော့ ကြောင်တွေကို တွေ့ရပါတယ် … (ထူးဆန်းတယ်နော်)
ဘယ်ကြောင်က မီးကွင်းကို ဖြတ်ခုန်တာတုန်းတော့ မသိပါဘူး …။
ဒီလိုနဲ့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် (ကျောင်းပေါ်မှာ တံမြက်စည်းလှည်းနေတဲ့ တောင်မလေးဒွေကို) လိုက်ကြည့်အပြီးမှာတော့ …
အင်းလေးကနေ ညောင်ရွှေကို ပြန်လည် ထွက်ခွာ လာခဲ့ပါတယ် ….။
အပြန်ခရီးမှာ စက်လှေရဲ့ အရှိန်နဲ့ တဝီးဝီး တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေအေးတွေကြောင့် အတော့်ကို အေးလွန်းလှပါတယ် ….။
အင်းလေးရဲ့ နေဝင်ရီတရော မြင်ကွင်း တစ်ခု
ညောင်ရွှေကို ပြန်ရောက်တော့ ည (၇) နာရီ ဝန်းကျင် ရှိနေပါပြီ ….။
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်းမှာတော့ ဦးတီးကြောင် လို့ခေါ်တဲ့ ရှမ်းမ ချောချောလေးတွေ ရှိရာ
တောင်ကြီးဆီကို ချီတက် ခဲ့ကြတယ် ဆိုပါတော့ ခင်ဗျာ ….။
ညောင်ရွှေ ကနေ တောင်ကြီးကို အသွား လမ်းခုလတ်မှာ …
အေးသာယာ စပျစ်ဝိုင် စိုက်ခင်းအရောက် ဆင်းပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လျောက်ကြည့်ကြပါတယ် …။
စပျစ် စိုက်ခင်းက အကျယ်ကြီးပါပဲ …။
တောင်တွေနဲ့ဆိုတော့ တစ်မျိုးလည်း လှနေပါတယ် …။
ဝိုင်ဈေးကတော့ အတော်လေး မြှောက်ပြီး အမြည်းလည်း မပေးပါဘူးတဲ့ ….။
ဝယ်တဲ့လူတွေ ဝယ်ကြတာပေါ့ …။ ကျုပ်ကတော့ မဝယ်ဘူး …။ အလကားပဲ ဒါ့ပုံ ရိုက်ယူလာခဲ့တယ် …။
ဒါ့ပုံက လက်ဆောင် ပေးတဲ့ထဲမှာ ပါပြီးပြီနော် ….။
ညောင်ရွှေက မထွက်ခင် မနက်ခင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ မီးပုံးပျံတွေ
အေးသာယာ စပျစ် စိုက်ခင်း အဝင်ဝ
ဒါကတော့ အေးသာယာ စပျစ် စိုက်ခင်းပါ
နောက်တစ်ပိုင်း ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ ….။
နောက်ဆုံး တစ်ပိုင်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ….။
အားတင်းပြီး ထပ်မံ အားပေးကြပါဦးလို့ ……. အဟီးးး
ဒီတစ်ခါ မကြေညာ တော့ဘူးနော် …
တော်ကြာနေ သောက်မြင်ကပ် ပုဒ်မနဲ့ ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်ခံနေရလိမ့်မယ် ….။
အားပေး ကြည့်ရှုကြသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ ခင်ဗျာ …။
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ဖူးသွားတယ်။
မောင်အံရဲ့ ကုသိုလ်ကိုလည်း သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ကြောင်ခုန်ကျောင်း။ သိပြီ။ ခု မှတ်မိသွားပြီ။ :harr:
မမခိုင်ဇာကို ကျေးဇူး အထူးပါ …
ကျုပ်ရဲ့ ကုသိုလ်တွေကို မျှဝေ ရသွားပြီပေါ့ဗျာ ..
ကိုယ့်ရဲ့ မေးခွန်းက နဲနဲ Stupid ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..ဒါပေမယ့် ကိုယ်နောက်ဆုံး အဲဒီကျောင်းကိုရောက်ခဲ့ဖူးတာ ၁၀နှစ်မကရှိသွားပြီမို့လို့….
ကြောင်ခုန်တာက ဖော်ရိန်နာတွေ များမှ
ခုန်ပြပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …
တစ်ပတ် တစ်ခါလောက်များ ဖြစ်လေမလားပဲ …
ကျနော်တို့တော့ ခုန်တာ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး …
အင်း … သဂျင်းမီးတော့ ဘာဝင်ပြောမလဲ မသိဝူး…
တိရစ္ဆာန် ညှင်းပမ်းတယ်တို့ …
ဘုန်းကြီး မ၀တ်နဲ့ ဆပ်ကပ် ထောင်တို့..
အဲ့ဒါတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်မယ် ယူဆပါကြောင်း….
ဘာမှမလုပ်.. ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာထက်တော့.. အဆ ၁၀၀မကကောင်းကြောင်း..
နိုင်ငံခြားသားတွေ.. အဲဒါကြောင့်လည်လည်လာရင်.. ဘေးရွာတွေလည်း.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းပွင့်.. ၀င်ငွေရနိုင်ကြောင်း..
ဘုရားဖူးရင်း သာဓုခေါ် သွားပါတယ် မောင်အံဇာ..
ဘော်ဒါပုံ ထည့်တော့ ပိုပြည့်စုံတာပေါ့ကွယ်…. :hee:
ဒီတစ်ခါတော့ ထည့်တော့ပါဘူးဂျာ ..
ဘော်ဒါပုံ ကြောဒါ ..
ဒီတစ်ခါပါ ထပ်ထည့်ရင် ခဲနဲ့ ဝိုင်းထုခံရမှာ စိုးလို့ ..
အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးဘာလို့ …
ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး ဘုရားလည်း ဖူးသွားပါတယ် အံချာတုံး စပျစ်ပင်က်ု အခုမှ မြင်ဘူးတယ်
အေးသာယာ စပျစ်ဝိုင်က နံမည်ကြီးတံဆိပ်ဘဲဗျ။
ကျွန်တော်က ၀ိုင်မကြိုက်တော့ အရသာတော့ သိပါဘူး။
ကိုအံစာတုံးလည်း ၀ိုင်ဝယ်ဘူးဆိုတော့ မကြိုက်တာလား လုခံရမှာကြောက်တာလားဟင်။
ကြောင်ခုန်ကျောင်းမှာ ဦးကြောင်ကြီးတို့အတွက် အမှတ်တရ ဒါ့ပုံလေးတွေ မရိုက်ခဲ့ဘူးလားမောင်အံရေ
အံဇာ ဖောင်တော်ဦးဘုရားဖူးရတာ အေးဆေး ရှိလိုက်တာ
ငတို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်တွင်း ရောက်တာ လူတိုးလိုက်ရတာ မနည်း
ဘုရားတွေခမျာလည်း ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီး စက္ကူတွေနဲ့ မြုပ်လို့
အင်း ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိသာာ ဆိုတာ အဲဒါမျိုးကို ခေါ်သလားမသိ..
ဘယ်တော့ဖူးဖူး အင်းလေးဖောင်တော်ဦးက ဖူးလို့မ၀ဘူးဘဲ…
ဒါနဲ့ အင်းသူလေးဖြစ်ဖြစ် …
ထမင်းဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေကတော့ ခရီးသွားမှန်းသိရင် ရိတ်မယ်ဆိုတာ အစဉ်အလာလို ဖြစ်နေပြီဗျို့။ နောက်ဒီလူကို မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ မျက်နှာမထောက်ပဲ လုပ်တတ်တယ်။ မကောင်းတဲ့ စိတ်ဓတ်ပဲ။ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့်ဘာသာ စီစဉ်သွားပြီး မတတ်သာမှ ဝယ်စားတာ ကောင်းတယ်။
အရင်ကတော့ အင်းသူ/သား တွေ ဆိုတာ အင်မတန် ရိုးသားတယ် လို့ နာမည်ရှိပါတယ်။
အခုတော့ ဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု တွေ ဖလှယ်ရင်း ပိုက်ဆံအလွယ်ရတဲ့ နည်းတွေ သိသွားတာထင်ရဲ့။
သူတို့လဲ သူများဆီသွားရင် ခံရပေါင်းများရင်များနေမှာ။
အင်းလေး နဲ့ တောင်ကြီး တော့ ရောက်ဘူးတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး အရင်အချိန်တွေကို လွမ်းသွားပါကြောင်း။
တောင်ကြီးပုံတွေ ကို မျှော်နေပါတယ်။
အရီးလတ်အရင်က ဟန်းနီးမွန်းတုံးကသွားဘူးပုံရတယ် ဝါတာရှီမို့တာရော (i also too)
ဟေ့လူ .. ယောက်ကထီးဂျီးး
ကျုပ်အရီးကို အဲ့လို မထင်ဘာနဲ့ … ငွင်းး ငွင်းးး
အရီး သူကြောဒါ (မဟုတ်ဘူး) ဟုတ်တယ်မို့လား …
ကျွန်မက လက်ထပ်ပြီးတာနဲ့ သူများတိုင်းပြည် ကို တန်းပြီး လိုက်ခဲ့ရတာမို့ ဘယ်လို ခေါ်ရမယ်တောင်မသိပါဘူး။
အိမ်ကို ပြန်လွမ်းတာနဲ့ ဟန်နီ က သိပ်မချိုလိုက်ဘူး။
တောင်ကြီးက ကျွန်မ သူငယ်ချင်း (မိန်းကလေးဖော်) နဲ့ အတူတူ ၆လ လောက် အသစ်ဖွင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ။
၁၉၉၀ မှာ။ အရမ်းပျော်ခဲ့ပါရဲ့။
အဲဒီကနေ ညီအစ်မလိုဖြစ်ပြီး ရေစက် က ဒီအထိ ကို ဆုံ နေဆဲပါဘဲ။
၁၉၉၀ ဆိုတာ ရွာထဲ က ကလေးတွေ တောင် မွေးဦးမှာ မဟုတ်။
မီးပုံးပြန် အရဂါး စီးလို့ ရ၊ မရ ဒေါ့ သိဝူးးး
နိုင်ဂံချား တားဒွေဆိုရင် …
သိန်းနဲ့ချီးပြီး ပေးရဒါဒဲ့ ….။
မောင်းတဲ့ လူဂဒေါ့ အရဂါး စီးရဒယ် ထင်ဒါဘဲ … ငှဲ .. ငှဲ …
တခုသိချင်လို့ ပါခီဗျ ထောက် ခံစာ(ပါမစ်)ဥမမာ အဲလေ ဥပမာ
ဦးသိန်း ဒေါ်စိန် နဲ့ အမျိုးတော် တယ် အမေဒိက က ဥခိုင်နဲ့ ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်ကော မန်းနီးပေးဖို့ လိုလားခင်ဗျ:mrgreen:
ခုလို လာပေးတာ ကျေးကျေး ကမ္ဘာပါ ….
ဒါနဲ့ ဟိုနှစ်ပို့စ်ကိုရော သေချာ ကျည့်ရဲ့လားဟင်င်
အိုက်မှာ ဟိုဒင်း ပါလို့ .. အဟီး …
ကျုပ်သွားခဲ့တဲ့..မိုင်၁၀၀၀ခရီးထဲ.. နာပလို့ခေါ်တဲ့.. ၀ိုင်ထုတ်တဲ့ဝိုင်စိုက်ခင်းဒေသပါတယ်..
အမေရိကန်တွေ ၀ိုင်တင်မက…တိုးရစ်ဇင်နဲ့ပါ.. ဘယ်လိုလုပ်စားကြသလည်း.. ဆက်စပ်တွေးလို့ရအောင်…။